globalpressonline » Khasaaraha iyo Faa’idooyinka uu JSL u yeelan karo Saldhiga Ciidanka isbahaysiga Carbeed ay Berbera ku yeelan doonaan. Qalinkii A/rahman fidhinle UK
Khasaaraha iyo Faa’idooyinka uu JSL u yeelan karo Saldhiga Ciidanka isbahaysiga Carbeed ay Berbera ku yeelan doonaan. Qalinkii A/rahman fidhinle UK
Somaliland waxay dhacdaa marin biyoodka muhiimka ah ee loo yaqaan Baab Al Mandab ( The gate of tears ) marinkaas oo sida Suez-ka oo kale isku xidha Badda cad, Bada cas iyo Badweynta Hindiya. Marinkan muhiimka ah oo uu hada ka socdo loolanka gacanka cadmeed, ayaa waxaa dhawaan Isbahaysiga Carbeed JSL ka soo codsadeen in ay Saldhig Ciidan ( military Base ) ka sameystaan Gegida Dayaaradaha ee Magaaladaha Berbera oo hore u ahaan jiray Garoon Ciidan. Waxaa kale oo ilo wadareedyo udhuun daloola hawlahani ka dhawaajiyeen in ay isbahaysigaa carbeed ay doonayaa iyana , inay Saldhig kale oo badeed ay ka yagleeshaan Xeebta Awliyo koonbo oo 15 km xaga Waqooyi Koonfureed ka xigta Magaalada Berbera.
Saldhigan balaadhan ayaa isbahaysiga Carbeed u ah ” strategic interest ” Waxaana uu ku fadhiisan doona dhul baaxadiisu tahay 40 Miles aquare oo Saldhig ciidanka Cirka ah ” Air Base “. Saldhigaas oo Dayaaradaha dagaalka iyo hubkoodu hogan doonaan kana dagaal geli karaan markii loo baahdo..Waxaa kale oo Saldhigan lagu kaydin doonaa hubka Ciidamada kala duwan iyo saanada dagaalka, waxaana laga dhisi doonaa dhakhtar lagu daaweeyo bukaan socodka iyo dhaawaca ciidamadaa isbahaysiga carbeed. Waxaa kale Saldhigu yeelanayaa qayb badda ah oo aan aad uga fogeyn Saldhiga Ciidanka Cirka hadii lagu heshiiyo. Saldhigaa labaad oo noqon doona Saldhiga Ciidanka Badda ” Naval Base ” ayaa isna ku fadhiisan doonta dhul baaxadiisu tahay ugu yaraan ilaa iyo 20 Miles square kaas oo Maraakiibta Dagaalku ay ku soo xidhan doonaan, hogan doonaan oo shidaalka ka qaadan karaan, Shixnadaha dagaalkana ku keydsan doonaan kana shiraacan doonaan oo ka dagaal geli karaan.
Hadaba Su’aasha Qarniga ee Shacab weynaha reer Somaliland isweydiinayaan ayaa odhanaysa:
1-Sidee Dawlad aan la ictiraafin heshiis baaxadaas leh ula geli kartaa Dawlado baaxad leh oo aan ictiraafsaneyn oo ujeedooyinkoodu ku kooban yihiin” Security interests” ?
Waa maxay Faa’idooyinka yar ee Saldhigu u keeni karo Somaliland gaar ahaan Degaanka Gobolka Saaxil ?
A ) Wuxuu saldhigu soo kordhin karaa Shaqo abuur kooban, waxaana uu keeni karaa Faa’ido dhaqaale iyo mid ganacsi oo aan aad u badneyn.
Guntii iyo Gebagebadii: Markaad is-barbar dhigto khataraha ka iman kara iyo Faa’idooyinka inoogu jira Saldhig Ciidan oo laga dhiso Gegida Dayaaradaha ee Berbera, waxaa aad ubadan Khataraha dahsoon ee inooga iman kara Dal iyo Dad ahaan Sidaa daraadeed,Waxaa Golaha Baarlamaanka ee Somaliland laga codsanayaa in Saldhigan Ciidamadda ee Berbera ay khataraha ku gedaaman taxadar badan iyo wada tashi badan ka sameeyaan gaar ahaan nuxurka ku duugan isfahanka heshiiskaasi huwan yahay ka dibna aanay ansixin ee ay laalaan oo ay muraadkooda sharci ka gutaan khatardiisa badan awgeed.